Zoro miloko karipetra – Torohevitra misafidy ny karipetra tsara indrindra ho an’ny tokantrano - Carpet Color Trends
Home » Zoro miloko karipetra – Torohevitra misafidy ny karipetra tsara indrindra ho an’ny tokantrano
Zoro miloko karipetra – Torohevitra misafidy ny karipetra tsara indrindra ho an’ny tokantrano
Ny karipetra dia iray amin’ny haingon-trano izay saika foana ao amin’ny trano rehetra. Ka raha marina ny fifantenana dia diniho aloha ireo toro-hevitra momba ny fisafidianana karipetra tsara indrindra eto ambany. Fantatrao ve fa saika ny trano rehetra dia samy manao karipetra?
Ankehitriny dia afaka mandinika ny rivo-piainana ao amin’ny efitrano izay tsy mitovy amin’ny karipetra ianao. Miankina amin’ny lokony sy ny hetsiky ny karipetra voafantina ihany koa. Raha ny fandehany dia azonao atao ny mamolavola ny tranobe mora foana. Te hahazo ny karpetra tsara sy mety tsara ho an’ny trano ve ianao? Andao hojerentsika ireo torohevitra momba ny fisafidianana karipetra eto ambany.
Hevitra mivalona ho anao ny karipetra loko
Inona ny fitaovana karipetra fantatrao? Raha ny fahitana azy, misy fitaovana karipetra dimy, fantatrao. Indraindray isika dia mividy karpetra fotsiny araka izay iresahana nefa tsy tena mahalala izay karazana. Ireto misy karazany dimy amin’ny karipetra sy ny karipetra mena loko:
Ny loko mamirapiratra izay tsy miandany kokoa dia mitondra ny fahatsapana maivana ary mora kokoa ny mifangaro ao amin’ny efitrano
Loko miloko maizina
Ny loko maizina dia mampiseho fahatsapana mavesatra saingy somary marevaka kokoa anaty efitrano iray
Ny loko manintona toa ny mavo sy ny mavokely dia mitondra fahatsapana marim-pototra sy falifaly amin’ny efitrano iray
Ny loko lavenona
Ny lokon’ny lavenona dia afaka manome angovo estetika amin’ny sehatra rehetra
Ny manga dia manome ny fahatsapana toe-po mihavana sy mampitony
Ny loko mena dia maneho ny eroticism, angovo ary ny faniriana
Ny fofona maitso amin’ny natiora dia afaka manome rivo-piainana mahafinaritra, fialamboly ary firindrana izay manamora ny saina
Ny loko fotsy dia mampiseho ny fahatsapana ny madio, tsotra sy madio
Ny loko mainty
Ny loko mainty dia tena mety manolotra ny fahatsapana ny fomba fijery, lalina ary mistery kely
Ny fironana amin’ny karipetra ary ny karazana mety mifanaraka amin’ny efitranonao
Ny vokatry ny karipetra ao anaty efitrano iray dia tsy natao ho an’ny fiasa na ho haingo fotsiny. Ho an’ny fifidianan’ny loko karipetra mety dia ilaina amin’ny famaritana ny rivotra sy ny fiasa aorian’ny fametrahana azy. Satria ny loko amin’ity karipetra ity dia afaka mamelona ny habakabaka ary manome sanda aesthetic amin’ny efitrano iray.
# 1: Karazam-boninkazo Wool
Ekenao tokoa fa io akora iray io no akora milamina. Alao sary an-tsaina fotsiny ny mandry amin’ny karipasy vita amin’ny volon’ondry. Ena, ho tsara io. Mifanaraka amin’ny fiononany, ny palitao volon’ondry dia azo antoka fa lafo be. Na dia lafo aza, misy tombony vitsivitsy eto:
Mahazo aina be dia be ampiasaina
Ahoana ny fomba manadio karipetra volon’ondry? Tsotra, mila mampiasa malaky vovoka na fanadiovana maina fotsiny ianao.
# 2: karazan-damba vita amin’ny landy
Iza no tsy mahalala ny landy? Ity fitaovana iray ity dia azo antoka fa hanome fampiononana bebe kokoa raha oharina amin’ny volon’ondry. Ny sangan’iny tena malefaka no mahatonga ny landy ho tsara tarehy. Avy eo, ny fomba hanadiovana ny karipika kanto? Mitovitovy amin’ny fanadiovana volonondry volon’ondry, lamba landy dia voasasa amin’ny fanadiovana banga ihany koa.
# 3: Karazan-drongony karipetra Polypropylene
Aleoko karaoty vita amin’ny synthetic? Raha izany dia tokony hisafidy ny karazana karipetra Polypropylene na PP ianao. Na dia vita amin’ny fitaovana vita amin’ny synthetic, io karipetra io dia manana endrika malefaka. Koa satria vita amin’ny synthetic fitaovana, mazava ho azy fa mora vidy. Misy vidiny, misy kalitao entana.
Izany koa dia mihatra amin’ny baomba Polypropylene. Ny vidiny dia mora vidy hanaovana karpetra miaraka amin’ity karazana ity dia misy lesoka maromaro. Indreto misy lesoka:
Mihena haingana ny loko
Atao mora mipetaka ny paty
Indrindra ho an’io karipetra io dia afaka manasa azy amin’ny rano ianao.
# 4: karazan-damba an’ny nilona
Ity karazana karpetra ity dia misy fitoviana amin’ny karipetra karazana Polypropylene. Ny fitoviana dia ao amin’ny fitaovana misy karipetra. Na izany aza, ny fitaovana ny nylon dia ambaratonga avo noho ny fitaovana Polypropylene. Izany dia azo tsapain-tanana amin’ny fitaovana izay toa ny volon’ondry.
Eny, ity karazan-doko nylon ity dia mety kokoa ho anao izay mankafy rivo-piainana mamirapiratra. Nahoana? Matetika ny karazana karpet nylon dia manana loko manaitra. Ny fananana fitaovana mitovy amin’ny karazana karipetra teo aloha, ny karipetra nilona dia afaka hosasana amin’ny fampiasana rano ihany koa.
# 5: karazan’akony Sisal
Ity fitaovana iray ity dia mety mbola tsy taitra amin’ny ankamaroan’ny olona. Inona ny akora sisal? Raha ny fandehan’ny anarana dia avy amin’ny zavamaniry antsoina hoe sisal ity fitaovana ity. Ny akora voajanahary dia mampanan-karena ny haingo amin’ny karipetra. Mazava ho azy fa izany dia mahatonga ny karipetra sisal azo antoka azo ampiasaina.
Ahoana ny fitsaboana?
Aza manasa fatiantoka sisal amin’ny rano
Manadio fotsiny ny karipetra amin’ny alàlan’ny fanadiovana banga
Ankehitriny karazana karazana karipetra dimy izany
# 6: Karazan-kasety izay mitovy amin’ny kitay
Minoa na tsia, ny fahaizan’ny teknolojia dia nanitsina ny karipetra ihany koa. Ny porofo izany dia izao misy karipetra mitovitovy amin’ny gorodona. Eny, ny fisehon’ity karipetra ity dia mitovy amin’ny kitay, marbra, ary ny sasany dia mitovy amin’ny seramika. Raha mampiasa karipetra toy izany ianao dia tsara kokoa ny mitambatra izany amin’ny fampiasana fitaratra lehibe amin’ny zoron-trano tsirairay.
Nahoana? Ny fisian’ny fitaratra dia mety hanaratsy ny habaka misy. Hijery malalaka kokoa ny efitrano ary hivoatra kokoa ny karipetra.
Noho izany dia momba ny Carpet Color Trends ho anao ihany izy ity. Antenaiko fa ilaina ho anao io fampahalalana io. Azonao atao ny manomboka mandinika ny hevitra rehetra amin’ny karipetra miaraka amin’ny Tranon-doko loko Karets tianao indrindra. Noho izany, mifalia ny fandravaka ny trano malalanao amin’ny alàlan’ny fisafidianana karipetra mety!
Multi Colored Carpet Wall To Wall W
Blue Tile Floor What Color Walls Fo